आहा ! यसपाली कर्णालीका घुम्नैपर्ने गन्तव्यहरू (फोटोफिचर) – Enayanepal.com
आहा ! यसपाली कर्णालीका घुम्नैपर्ने गन्तव्यहरू (फोटोफिचर)
२०७६, २५ पुष शुक्रबार मा प्रकाशित
कर्णाली प्रदेश सरकारले तयार पारेको भ्रमण वर्षको लोगो
सुर्खेत । कर्णाली आँफैमा स्वर्गीय आनन्द प्राप्त गर्न सकिने र अलौकिक छ । कतिपयले यसलाई भर्जिन ल्याण्डका रुपमा समेत परिभाषित गरेको देखिन्छ ।
यसको प्रचार प्रसार हुन नसक्दा अहिलेसम्म यसका बारे कसैलाई पत्तो छैन । यसको अर्को बिषेशता भनेको यसबाट चिनियाँ बजार टाके पुग्ने छोटो बाटो पनि हो । यो बाटो टाके पुग्न रोमणीय हिमताल र हिमपुल हुदैँ जानुपर्छ । विभिन्न जडिबुडीको भण्डारको रुपमा लिईने नेप्का गाउँ यसको पाटनमा रहेका दुध दह पनि हेर्न लायक दह छ । यस दहमा दुधजस्तै सेतो कञ्चन पानी छ ।hostkhabar बाट